Ngaba ungumNgcakazo okanye uMdlali weLottery?
Ikhaya > Ngaba ungumNgcakazo okanye uMdlali weLottery? Olu luhlu lwe-Asmodeus lunokukunceda ukuphumelela ngaphezulu
Ngaba ungumNgcakazo okanye uMdlali weLottery? Olu luhlu lwe-Asmodeus lunokukunceda ukuphumelela ngaphezulu
Xabiso rhoqo € 65 Intengo yentengiso € 0 Ixabiso lento /nganye
Enye i-US 4.5 enye- € 65 Enye i-US 5 enye- € 65 Enye i-US 5.5 enye- € 65 Enye i-US 6 enye- € 65 Enye i-US 6.5 enye- € 65 Enye i-US 7 enye- € 65 Enye i-US 7.5 enye- € 65 Enye i-US 8 enye- € 65 Enye i-US 8.5 enye- € 65 Enye i-US 9 enye- € 65 Enye i-US 9.5 enye- € 65 Enye i-US 10 enye- € 65 Enye i-US 10.5 enye- € 65 Enye i-US 11 enye- € 65 Enye i-US 11.5 enye- € 65 Enye i-US 12 enye- € 65
I-Asmodeus, inkosana enkulu yomoya ngumlawuli wazo zonke iziyolo zomhlaba nokungcakaza. Uthanda lowo umhloniphayo
As ukumkani wolonwabo kunye nemidlalo uya kukunceda ngalo lonke ixesha xa udlala le midlalo. Oku akuthethi ukuba uya kuphumelela ngalo lonke ixesha kodwa i-Asmodeus iya kuyonyusa ixesha lakho elikhulu.
le iringi ekhethekileyo yesilivere yokungcakaza kunye nolonwabo nge-sigil yeAsmodeus ilungele
Kwimeko apho kuya kufuneka uzame i-Asmodeus. Njengukumkani wolawulo lokonwaba nguye onokukunceda kakhulu. Uninzi lwabathengi basithumelele amava abo kunye nale nkosana yesihogo emangalisayo. Akayi kukunceda kuphela ngazo zonke ezi zinto zikhankanywe apha ngasentla, kodwa uya kukunceda nangobuchule bobugcisa, ngeenkwenkwezi kunye ne-arithmetic njengoko ziyinxalenye yamandla akhe.
Intle Isilivere ekhonkxiweyo kunye ne-sigil ye-Asmodeus okanye i-Asmoday ebhalwe kunye neseshoni yethu ekhethekileyo yokuzahlulela ukuze iqiniseke ukuba iyakusebenzela.Iringi nayo ikrolwe ngokukhethekileyo ukubiza i-enm yomoya i-Asmodeus. Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile kukuyinxiba.
Ayikho enye into, ethenjisiweyo. Akunyanzelekanga ukuba unikele okanye wenze nantoni na. I-Asmodeus iya kuhlala ikunye nawe ukukunceda.
Kuya kuthatha malunga neentsuku ezingama-28 ze isangqa ukulungelelanisa kuwe, kodwa emva koko awuyi kukholwa zizinto ezinkulu eziza kwenzeka kuwe.